PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဝင်တော့မည် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန် ၉ နာရီမှာရရှိတဲ့ ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံ(image URL နဲ့တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် refresh လုပ်ရင် နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ပုံအဖြစ်ပြောင်းသွားပါမယ်) မှာ ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုစတင်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အခါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပျော့သွားပြီး Tokin ပင်လယ်ကွေ့(ဗီယက်နမ်ပင်လယ်ကွေ့) ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကာ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာတော့ ဗီယက်နမ်ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ရင်း လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ PARMA ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီကို ၆၅ ကီလိုမီတာ(၄၅ မိုင်နှုန်း)ရှိပါတယ် မုန်တိုင်းရဲ့ အချင်းကတော့ မိုင် ၂၅ဝ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်၊ လေမပြင်းပေမဲ့ မိုးကြီးလို့ မြေပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တော့ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၈ နာရီမှာ PARMA ရဲ့ တည်နေရာကို အခုလိုသိရပါတယ် –
Distance 1: 55 km (30 nm) ESE of Qionghai, Hainan Is.
Distance 2: 145 km (78 nm) SSE of Haikou, Hainan Is.
Distance 3: 155 km (83 nm) ESE of Danzhou, Hainan Is.
Distance 4: 190 km (103 nm) NE of Sanya, Hainan Is.
Distance 5: 485 km (262 nm) SW of Hong Kong
PARMA is expected to make landfall over Hainan Island this afternoon and will weaken intoaTD. The 2-day Short-Range Forecast shows PARMA moving into the Gulf of Tonkin tomorrow…and dissipating over Vietnam on Wednesday Oct 14.
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, tropical-depression, tropical-storm, weather. 1 Comment »
One Response to “PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဝင်တော့မည်”
Tropical storm Parma lands on S China province Hainan2009-10-12 11:02:37
ဒီနေ့ နံနက် ၉နာရီ၅ဝမိနစ် မှာ PARMA ဟာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်(တစ်နာရီ ၅၄ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့) ဟိုင်နန်ကျွန်း Longgun မြို့နယ်ကို စတင်ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထိခိုက်မှုသတင်းများတော့ မရရှိသေးကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အခုလိုတွေ့ရပါတယ် –
HAIKOU, Oct. 12 (Xinhua) — Tropical storm Parma madeapowerful landing in Wanning City in the southernmost island province of Hainan on Monday, said the provincial observatory.
The Hainan provincial meteorological station said Parma landed in Longgun Township at 9:50 a.m. Monday, packing wind withaspeed of up to 54 km per hour.
No casualties were reported. As of Sunday night, the city had called 2,188 vessels back to harbor and evacuated 3,791 people working on the sea.
China’s central observatory said on Sunday that besides Hainan, the storm would also bring strong winds to coastal areas of Guangdong and southern Fujian as well as Taiwan.
« PARMA ဒုတိယအကြိမ် နှိပ်စက်သွားခဲ့သည့် ဖိလစ်ပိုင် မြင်ကွင်းများ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကို တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ »